Dunida waxaa laga yaabaa in ay ku dhuftey mareegta isdhexgalka ee 2014 - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » SAYNISKA Dunida waxaa laga yaabaa in ay ku dhuftey shahiido isweydaarsi ah 2014 - BGR
Dunida waxaa laga yaabaa in ay ku dhuftey mishiinka isweydaarsiga ee 2014 - BGR
Dhamaadka dhammaadka 2017, adduunka astronomy wuxuu ku nuuxnuuxsaday waxa uugu muuqday inuu yahay booqdaha ugu horeeya ee isbarbar-dhigta ee uu soo arkay nin. Waxay ahayd shay dheer, oo sigaar ah oo la ogaaday in Oumuamua oo si dhaqso ah u muuqday qorraxdeena, kuna soo laabtay goobaha isgaadhsiinta si dhakhso ah, saynisyahannadu waxay ku qasbanaadeen in ay wax ka bartaan.
Hadda, ka dib marka dib loo eego mowqifka cilmi baarayaasha Harvard u fakir in dunidu ay ogaatay caddaynta mowqifkii ugu horeeyay ee isweydaarsi ku dhuftay Earth. Haddii tani run tahay, dhagaxu wuxuu ka yimid meerkeena si fiican Oumuamua.
From Space.com Cilmi-baarayaasha Harvard Avi Loeb iyo Amir Siraj ayaa xogta ka helay Xarunta Dhismayaasha Dhulka ee Dunida (CNEOS), taas oo la socota walxaha dhul-galka ah iyo dhagaxyada meelo kala-baxa. .
Waxay si hoose u baari jireen xawaaraha alaabooyinka loo arkay inay u socdaan iyo sidoo kale xagasha ay ka soo horjeedaan Earth. Mid ka mid ah meteoror, gaar ahaan Papua New Guinea, oo ah qaran South Pacific ah, ayaa isla markiiba qabsaday dareenka.
Dhagaxgu wuxuu u dhaqaaqay xawaare fara badan oo ka badan 130 000 km / h. Xagashadeeda waxay tilmaamaysaa in laga yaabo inay ka soo baxdo nidaamkayaga qoraxda.
Soo helitaanka shey aan ka muuqan nidaamka qorshaha kale waa dhibaato weyn, xaqiiqda ah in uu ku burburay halkan Earth ayaa xitaa aad u roon. Loeb xittaa wuxuu soo jeedinayaa in dhacdooyinka noocan oo kale ah ay masuul ka noqon karaan kala qaybsanaanta nolosha ee agagaarka Universe.
"Waxaad qiyaasi kartaa in haddii meteoriyeyaashan laga saaro aagga la degan yahay ee xiddig, waxay ka caawini karaan noloshooda hal nidaam qorshaysan. "Ayuu yiri Loeb Space.com .
Ghana: waxa uu ku dhashey XinfoX xinjirta iyo 2 ilmo-galeenka, waxay ku kalsoonayd xaaladdeeda
ARDAYDA ROBOTIK ARRIMAHA BULSHADA CALAAMADAHA CARRUURTA